Vakawanda vanoziva kuti kubata nguva chinhu chinokosha asi vanogara vachingononoka. Bhaibheri rine mazano akanaka nezvenyaya iyi.
Kubata nguva kwakanakirei?
Vamwe vanoti kana ukabata nguva unoita zvinhu wakagadzikana. Kunoitawo kuti vanhu vakuremekedze. Sei tichidaro?
Kubata nguva kunoratidza kuti ukapiwa basa rekuita unorigona. Kana uchibata nguva zvinoratidza kuti uri munhu akarongeka uye hauzotadzi kuita zvimwe zvinhu zvaunenge wakaronga.
Kubata nguva kunoita kuti vanhu vavimbe newe. Mazuva ano vanhu vakawanda havaiti zvavanenge vavimbisa, saka kana tikaita zvatinenge tataura, vanhu vachatifarira. Veukama uye shamwari vanowanzoremekedza munhu akavimbika. Vashandi vanosvika pabasa nenguva uye vanopedza basa ravo panguva vanofarirwa chaizvo nevanhu vavanoshandira. Vashandi vakadaro vanogona kutowedzerwa mari uye vanonyanya kuvimbwa navo.
Bhaibheri rine mavhesi anotaura nezvenyaya yekubata nguva. Semuenzaniso, imwe vhesi inoti: “Zvinhu zvose ngazviitike nenzira yakakodzera uye zvakarongeka.” (1 VaKorinde 14:40) Kana vanhu vakawirirana kuti vachasangana nenguva yakati panzvimbo yakati, vanofanira kubata nguva. Bhaibheri rinotizve: “Chinhu chimwe nechimwe chine nguva yakatarwa, uyewo zvose zvinoitwa pasi pematenga zvine nguva yazvo.” (Muparidzi 3:1) Vhesi inotevera inozoti pane “nguva yokudyara nenguva yokudzura.” (Muparidzi 3:2) Kuti murimi anyatsowana goho rakakura, anofanira kudyara panguva yakakodzera. Saka kubata nguva ndiko kuchaita kuti murimi anyatsokohwa pakuru.
Bhaibheri rinotaura chimwe chikonzero chinokosha nezvenyaya yekubata nguva: Tinenge tichiratidza vamwe kuti tiri kuvaremekedza uye kuti tinoziva kuti vane zvimwe zvinokosha zvekuita. (VaFiripi 2:3, 4) Asi kana tikagara tichinonotsa vamwe, tinenge tichitambisa nguva yavo.
‘Musaramba muchiva nehanya nezvinhu zvamunoda imi pachenyu, asi ivai nehanya nezvinhu zvinodiwawo nevamwe.’—VaFiripi 2:4.
Ungaita sei kuti ubate nguva?
Bhaibheri rinotikurudzira kuti tigare taronga zvinhu zvedu. (Zvirevo 21:5) Kana ukaona kuti une dambudziko rekubata nguva, zvimwe uri kuzviwanzira zvekuita. Wadii kurega kuita zvimwe zvinhu zvisinganyanyi kukosha? Kana uine kwakawanda kwauri kufanira kuenda, ita kuti nguva dzacho dzisava pedyo napedyo kuitira kuti uzokwanisa kusvika pachine nguva. Izvi zvichaita kuti usanonoka kunyange pakaerekana paitika zvinhu zvakadai sekuwanda kwemota mumugwagwa kana kuti kunaya kwemvura.
Bhaibheri rinokurudzirawo kuva nemwero. (Zvirevo 11:2) Izvi zvinoreva kuti unofanira kuziva pane zvimwe zvinhu zvausingagoni kuita. Usati wabvuma kuita chimwe chinhu, tanga waona kuti unozozvikwanisa here. Kuzviwanzira zvekuita kunoita kuti uzonetseka uye kunotovhiringidzawo zvirongwa zvevamwe!
Bhaibheri rinotiudza kuti tishandise nguva yedu nekuchenjera. (VaEfeso 5:15, 16) Tanga kuita zvinhu zvinonyanya kukosha. (VaFiripi 1:10) Semuenzaniso, paunenge uri mukombi kana kuti wakamirira vamwe, unogona kutoshandisa nguva iyoyo kuverenga rimwe bhuku kana kuti kuronga zvimwe zvinhu.